50 Nea Yehowa aka ni: “Awaregyae krataa+ a mede gyaa mo maame no wɔ he?+ Anaasɛ wɔn a mede wɔn ka no mu hena na metɔn mo maa no?+ Mo ankasa mfomso+ nti na wɔatɔn mo, na mo mmarato nti na wɔapam mo maame.+ 2 Dɛn nti na mebae no na obiara nni hɔ?+ Na dɛn nti na mefrɛe no obiara annye so?+ So me nsa yɛ tiaa sɛ ebegye mo,+ anaa minni tumi a mede beyi mo? Hwɛ, mede m’animka+ ma po yow,+ na mema nsubɔnten dan sare.+ Na emu nam bɔn, efisɛ nsu nnim; na osukɔm nti, wowuwu.+ 3 Mede sum kataa soro,+ na mede atweaatam yɛɛ ne nkataho.”+ 4 Awurade Tumfoɔ Yehowa ankasa ama me asuafo tɛkrɛma+ na mahu asɛm a mede bebua nea wabrɛ.+ Anɔpa biara onyan me, onyan m’aso ma mitie sɛ asuafo.+ 5 Awurade Tumfoɔ Yehowa ankasa abue m’aso, na me nso mantew atua,+ na mansan m’akyi.+ 6 Medan m’akyi maa mmaakãfo, na mede m’afono+ maa wɔn a wotutu nhwi. Na mamfa m’anim anhintaw animguase ne ntasu.+ 7 Awurade Tumfoɔ Yehowa ankasa bɛboa me,+ enti m’anim rengu ase. Mama m’anim ayɛ sɛ twɛrebo, na minim sɛ m’ani renwu.+ 8 Nea obu me bem no bɛn me.+ Hena na obetumi ne me adi asi? Ɔmmra mma yennyina hɔ anim ne anim.+ Hena na ɔne me wɔ asɛm?+ Ma ɔmmɛn me.+ 9 Hwɛ, Awurade Tumfoɔ Yehowa ankasa bɛboa me. Hena na obetumi abu me fɔ?+ Hwɛ, wɔn nyinaa begow atetew sɛ atade.+ Nwewee bɛwe wɔn ma wɔasa.+ 10 Mo mu hena na osuro+ Yehowa, na otie n’akoa asɛm,+ nea ɔnam sum mu daa+ a hann biara nhyerɛn mma no no? Ma ɔmfa ne ho nto Yehowa din so,+ na ɔmfa ne ho ntweri ne Nyankopɔn.+ 11 “Hwɛ, mo a moasɔ gya a moma ogya dɛw nyinaa, monnantew mo gya no hann ne ogya a moama ɛredɛw no mu. Na nea mubenya afi me nsam ni: Yaw mu na mobɛdeda hɔ.+